Portable Mobile Prefab trano fitoeran-javatra amin'ny Bathroom (fitoeran-javatra Home) - China Qingdao Xinmao ZT Steel
Steel Structure ara-nofo
Color vy Sheet
Trano fitoeran-javatra fisaka fonosana
Efitrano fatoriana iombonana / appartment
Trano fitoeran-javatra Shipping
Steel Frame Structure Atrikasa Buildings
Portable Mobile Prefab trano fitoeran-javatra amin'ny Bathroom ...
Portable Mobile Prefab trano fitoeran-javatra amin'ny Bathroom (fitoeran-javatra Home)
Description: Modular portable trano fitoeran-javatra Natao araka ny fepetra arahana ny nandefa fitoeran-javatra marina. Izany dia vita tamin'ny vy prefab mazava toy ny toetsika sy ny sandwich tontonana ny rindrina sy ny tafo, dia nanamora amin'ny varavarankely, varavarana, Flooring, valin-drihana, ary hafa fanampiny Accessories. Izy ireo amin-kery manify ka nankeo ary azo accessorized mba hifanaraka amin'ny fepetra takiana. Cabinet tarika rafitra ho an'ny fampidirana ny vy sy ny t ...
Modular portable trano fitoeran-javatra Natao araka ny fepetra arahana ny nandefa fitoeran-javatra marina. Izany dia vita tamin'ny vy prefab mazava toy ny toetsika sy ny sandwich tontonana ny rindrina sy ny tafo, dia nanamora amin'ny varavarankely, varavarana, Flooring, valin-drihana, ary hafa fanampiny Accessories. Izy ireo amin-kery manify ka nankeo ary azo accessorized mba hifanaraka amin'ny fepetra takiana. Cabinet tarika rafitra ho an'ny fampidirana ny vy sy ny hatsiaka-namorona vy welded miara-manao ny fitsipika singa. Ny trano dia azo natao toy ny tarika iray monja, na mifandray amin'ny iray manontolo avy amin'ny vata maro, amin'ny alalan'ny fifandraisana tsotra toy ny horonan. Noho izany dia mora sy fifadian-kanina ho nametraka sy disassembled.
Ity tetikasa ity toerana tany Espaina. Izany no eo amin'ny tendrombohitra sy ny farihy, lavitry ny tabataba an-tanàna. Izany dia ahitana ny 49 sambo fitoeran-javatra. Ny endrika ankehitriny mahatonga ny trano toa kanto sy aina ho velona. Haveing ​​fialan-tsasatra ao tsy maintsy ho tena Cozy sy miala sasatra.
Izany dia trano fisakafoanana. Afaka manana kafe sy manana ny sakafo eto.
20FT / 40FT Modular Portable fitoeran-javatra House Specifications
External habeny 6058mm (L) * 2438mm (W) * 2591mm (H) / 12116mm (L) * 2438mm (W) * 2591mm (H)
House zorony Fahazavana efa voarafitra mialoha vy
Roof takelaka Rock Wool / EPS sandwich tontonana (araka ny mpanjifa takina)
Panel Rock Wool / EPS sandwich tontonana (araka ny mpanjifa takina)
Ground base Fahazavana efa voarafitra mialoha vy
Window PVC sliding varavarankely na aluminium firaka na plastika varavarankely vy varavarankely
Door Streel sandwich rafitra na aluminium rafitra sandwich tontonana varavarana.
diso Ceiling PVC valindrihana
Electricity sys 2 jiro & 1 jiro
tsy voatery Accessories Fanaka ho an'ny velona trano fonenana, birao, efitrano fatoriana iombonana, kabine, Kitchen, Bathroom, ranonorana, sns
Application Living trano, birao, efitrano fatoriana iombonana, carport, fivarotana, trano rantsankazo, kiosk, efitrano fivoriana, cantine, sns
Dia tonga soa lafiny namboarina.
Roof, ambany endriny, tsanganana sy ny rindrina kibon ny fitoeran-javatra ho fisaka trano-Feno hipoka, dia toy izany no manamaivana ny fitaterana boky, dia mety ho mora foana napetraka an-toerana na ho ampiasaina amin'ny fitaterana tetezamita.
(1) Nanatrika Loading sy ny fitaterana
iray 40FT HC entana 2 milentika nivory trano fitoeran-javatra amin'ny dimension- 5850mm * 2250mm * 2500mm
(2) Flat-entana ny fitaterana:
Plan A: iray 20FT GP entana 4 milentika 20 tongony trano fitoeran-javatra
Plan B: One 40FT History of the Church entana 8 mametraka 20 tongony trano fitoeran-javatra na 4 milentika 40 tongony trano fitoeran-javatra.
Kobany rehetra dia voaaro amin'ny PE sarimihetsika, ary ny vy structure Diso amin'ny tenona fehin-kibo. Accessories ho feno taratasy boaty na plastika harona. Windows sy ny lela-varavarana ho amin'ny vata hazo feno.
Qingdao Xinmao ZT Steel Fanorenana Co., Ltd orinasa dia iray amin'ireo tsara orina orinasa traikefa sy manokana eo amin'ny mpanamboatra trano isan-karazany sy ny fitoeran-javatra prefab trano miaraka amin'ny kalitao tsara sy ny fifaninanana vidiny. Naorina tamin'ny taona 2003. Maherin'ny 50 R & D mpiasa ary maherin'ny 400 ireo mpiasa manohana antsika hahazo ny tsena lehibe anjara. Ny orinasa nahazo ny kalitao iraisam-pirenena ISO9001 taratasy sy ny Steel Structure Construction fahaizana Certificate Grade II.
Tongasoa eto amin'ny hitsidika ny orinasa mivantana.
20 Flat Pack fitoeran-javatra House
40 tongotra fitoeran-javatra House
40ft Fandefasana fitoeran-javatra House
China fitoeran-javatra House
fitoeran-javatra House 40 Ft
fitoeran-javatra House Shina
Expandable fitoeran-javatra House
Expandable Prefab fitoeran-javatra House
Flat Pack Cheap fitoeran-javatra House
Flat Pack fitoeran-javatra House
Flat Pack fitoeran-javatra House For Sale
Flatpack fitoeran-javatra House
Flatpack Living fitoeran-javatra House
High Quality 20ft fitoeran-javatra House
Modified Fandefasana fitoeran-javatra House
Ocean Shipping fitoeran-javatra House
Prefab Ranomasina fitoeran-javatra House
efa voarafitra mialoha fitoeran-javatra House
Fandefasana fitoeran-javatra House
Fandefasana Entana fitoeran-javatra House Building
Fandefasana Entana fitoeran-javatra House For Sale
Solar fitoeran-javatra House
ambanin'ny fitoeran-javatra trano
20 FT Modified Fandefasana fitoeran-javatra House Noho ny Fahotany ...
Site efa voarafitra mialoha Installation Contai Fandefasana ...
Flat Pack 20FT fitoeran-javatra trano izy Kitchen, Wa ...
Smart efa voarafitra mialoha Mobile Shipping fitoeran-javatra H ...
Toe-karena Modern Sandwich Panel Flat Prefab Pack ...
Prefab Prefab Flat Pack Ind trano ho fitoeran-javatra ...
Qingdao Xinmao ZT Steel Fanorenana Co., Ltd.